Home Wararka Dhaca iyo boobka hantida ayaa ku sii faafaya qaybo kamida dalka Koonfur...
Dhaca iyo boobka hantida ayaa ku sii faafaya qaybo kamida dalka Koonfur Afrika
Waxaa ku sii faafaya dalka Koonfur Afrika dhaca loo gaysanaya Goobaha Ganacsiga. Waxaa dilo kale jira toogashada dadka u badan Ajaanibta ee ka ganacsada dalka Koofur Afrika kadib markii uu xoogeystay isku dhaca Ciidamada Ammaanka iyo kooxaha kasoo horjeeda Xabsiga la dhigay Madaxweyne Jacob Zuma.
Waxaa jira Isu-soobaxa iyo khalalaase ka dhashay diidmada ay shacabka diidan yihiin xukunka Madaxweyne Zuma, laakiin Dibadbaxayaasha ayaa isku badalay in ay gubaan Goobaha Ganacsiga, Xarumaha Dowladda & waddooyinka oo isu socodkoodu istaagay.
“Meelo kala duwan ayaa gubanaya, Ciidamadu waxa ay rasaas ku ridayaan dibadbaxayaasha oo qudhooda tuuryo kala hortagay, boobka & toogashada Xisbaab malaha waxaana intaas dheer cabsida Ajaanibta ganacsiga leh goobaha ganacsiga” Sidaasi waxaa yiri qof kamid ah dadka ku sugan Magaalada Durban.
Ciidamada Ammaanka ayaa xoojiyay howlgallada ka dhanka ah Burcadda dhaca geysaneysa ee ku hoos dhuumaneysa dibadbaxyaasha, haddii aan wax laga qaban Koofur Afrika waxa ay lugaha la geli doontaa dhibaatooyin dhaqaale xumo. Dowlado iyo ururo kala duwan ayaa u jeediyay Xukuumadda Koofur Afrika in ay mas’uuliyad iska saarto ilaalinta muwaadiniinta Ajaanibta ah oo hantidooda ay qaateen kooxo u dhacay halka qaarkood naftooda ay ku waayeen.